Miisaaniyadda dalka oo maanta baarlamaanka loo bandhigaya | Star FM
Home Wararka Kenya Miisaaniyadda dalka oo maanta baarlamaanka loo bandhigaya
Miisaaniyadda dalka oo maanta baarlamaanka loo bandhigaya
Wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta howlaha qaranka Mr. Ukur Yatani ayaa lagu wadaa inuu maanta baarlamaanka ka hor akhriyo qiyaasta miisaaniyad sanadeedka dowladda.
Shalay ayay ahayd markii baarlamaanka la hor geeyay warbixin uu soo saaray guddiga maaliyadda iyo qoondeynta miisaaniyadeed ee uu guddoomiyaha ka yahay xildhibaanka deegaanka Kieni ee ismaamulka Nyeri Kanini Kega .
Waxaa warbixinta lagu soo jeediyay in baarlamaanka loo qoondeeyo miisaaniyad dhan 37.9 bilyan halka xubnaha guddigan ay ku talinayaan in waaxda garsoorka ay sanadkan hesho 17.8 bilyan oo shilin.
Sidoo kale wasaaradda maaliyadda waaxyaheeda qaabilsan badbaadinta bulshada iyo deegaannada ay inta badan abaaruhu saameeyeen ee loo yaqaano ASAL ayaa laga dalbaday in ay isku duba ridaan barnaamijyada ay dowladda dhexe ku taageerto waayeellada iyo shakhsiyaadka dhibaatooyinka u nugul si warbixin dhameystiran looga soo saaro.
Previous articleDHAGEYSO:Wafdi ka socdo laanqayrta cas ee Kenya oo gaaray Dadaab
Next articleMaraykanka oo 500 oo milyan oo ah daawooyinka COVID19 ugu deeqaya 100 waddan